Ukuphupha ngesondo ngokulala ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukulalana ngesondo kukungeniswa kwelungu elonwabileyo kwi-anus yeqabane lesondo. Ukulalana ngesondo kwenziwa kubudlelwane bobufanasini kunye nobufanasini. Kuxhomekeke kukhetho lweqabane, iithoyi zesini ezinje ngedildos kunye / okanye izidlidliza ziyasetyenziswa apha.
Ukuba uthanda ukuba neentlobano zesini ezimpundu neqabane lakho, kuya kufuneka usoloko unonophele indlela enononophelo, kuba ingingqi ye-rectum ibuthathaka kakhulu kwaye ayimnandanga kwaye yenzakele kabuhlungu.
Ngelixa ngexesha lokwabelana ngesondo kwilungu lobufazi, ukufuma okuyimfuneko kuyenziwa ngokwendalo xa inkanuko yenzeka ngokufihla amadlala obufazi, oku kuyasilela emathunjini. Ukuqhubeka nokonwabela amava erotic anelisa macala omabini, ukusetyenziswa kwesithambisi akufuneki kunikezelwe.
Ukwabelana ngesondo ngokulala nomntu yinto ehlala isothusa kwaye abantu abaninzi banxulumana kuphela namaqabane athandana namanye. Nangona kunjalo, kuqikelelwa ukuba kwisibini esinye kwisibini esitshatileyo siyakuthanda ukwenza uthando ngasemva. Ukwabelana ngesondo ezimpundu kukwabonakala njengomqondiso wephupha kumava abantu abaninzi ephupha, umzekelo, kumaphupha amabi ahambelana nokudlwengulwa, umzekelo.
1 Uphawu lwephupha «isini ezimpundu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isini ezimpundu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isini ezimpundu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isini ezimpundu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukufumana isondo ezimpundu ephupheni kuhlala kunxulunyaniswa neemvakalelo ezinomdla kakhulu kumntu ophuphayo. Kwitoliki yamaphupha, nangona kunjalo, uphawu lwephupha "ukwabelana ngesondo" kuthetha izinto ezingathandekiyouthanda ukufulathela el mundo ngokwenene. Kuyinyani kwisaci: Into ongayiboniyo nayo ayikho.
Ukwabelana ngesondo nge-anal nako kunokuba yinto yokubonisa umnqweno woku ezahlukeneyo kubomi bakho ngokwesondo. Ukuba yayingamava amnandi ukuphupha ephupheni, oku kuphakamisa ukuba ungathanda ukuziqhelanisa nokuvuka ebomini. Ngokunokwenzeka ukuba sele uyenzile kwaye ngenxa yoko uphinde ufumane amaxesha amnandi kunye neqabane lakho ephupheni.
Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba awuzange ube nesibindi sokufezekisa lo mnqweno kunye neqabane lakho. Mhlawumbi kungenxa yokuba uyoyika ukuba basabele gwenxa. Ukutolikwa kwephupha kucebisa apha ngokungafihlisiyo. Nabani na onobudlelwane bokuthembela kufuneka nokuba akwazi ukunxibelelana ngokunyanisekileyo neminqweno yabo. Mhlawumbi esi sibini sineminqweno efanayo. Fumanisa!
Mhlawumbi omnye unesimboli yephupha "ukulala ngesondo" kwinqanaba lephupha kwimemori engalunganga ngenxa yokuba yayinxulumene nobundlobongela okanye intlungu. Amava ephupha ngesini sangasese emva koko abonisa amava amabi. Bakuphethe kakubi kakhulu kubomi bokwenyani, "shit" ngeyona ndlela inzima yelizwi, kwaye bakushiya wedwa unentlungu kunye neengxaki. Lowo unyamezele ukuba neentlobano zesini ezimpundu ephupheni kubonisa indlela angenakunceda ngayo impatho-mbi Ngabanye.
Uphawu lwephupha «isini ezimpundu» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, emva kokulalana ngesondo ngamanye amaxesha kunokuba ngumnqweno wento ethile. Ithintelwe fihla. Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, ukuba neentlobano zesini ezimpundu njengenkqubo yokwabelana ngesondo kuhlala kuhlala kuyimpikiswano enkulu.
I-anus, enoxanduva lokukhupha emzimbeni inokuvuka njani? Inokubaluleka ekutolikeni ngokuchanekileyo ukuba ubungumlingane osebenzayo okanye ongacacanga kwimeko yamaphupha. Ukuba ungeniswe ngomnye umntu, oku kuthetha ukuzinikela kunye nokuthembela. Uzinikela ngokupheleleyo komnye kwaye umvumele alawule isenzo sesondo.
Ukuba ubuyinxalenye esebenzayo kwintlobano zesini ezimpundu, oku kunokuvavanywa ngokwengqondo ngendlela eyahlukileyo. Kwelinye icala, uphawu lwephupha Ukunqwenela amandla kuba. Kwelinye icala, ikwabonisa ukukulungela ukuzibeka ngasemva. Ukuphupha kukubona kubalulekile ukwanelisa kuqala iimfuno (kunye nohlobo lwesini) lomnye.
Indlela oziva ngayo ngawe ngokunxulumene "nokwabelana ngesondo ezimpundu" umfanekiso wephupha unokuba sisipili esisesakho. Iingcamango zokuziphatha ukuba. Ke ngoko, cinga ngenyameko malunga nokuba uziva njani ngephupha. Ukhe wabelana ngesondo ezimpundu ngokwakho okanye wabona abanye besenza? Ngaba ukhe waziva uneentloni okanye wade wanomdla wokubona?
Phendula le mibuzo ngokunyaniseka kwaye unokufumana ukuqonda okutsha ngokupheleleyo ekucingeni kwakho okungazi nto.
Uphawu lwephupha «isini ezimpundu» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, ukwabelana ngesondo ezimpundu kuluphawu lwe Ukunikezela kunye nomnqweno wokungazi isikhokelo.